Toogasho ka dhacday Fagaara ku yaalla degmada Jilib | KEYDMEDIA ONLINE
Kooxda Al-Shabaab ayaa shalay gelinkii dambe ku toogatay Nin ay ku eedeysay inuu ahaa Sixiroolle ah oo muddo sanada ah ku shaqeysanayay sixirka xaaraanta ah.
JILIB, Soomaaliya - Kooxda Al-Shabaab ayaa shaacisay inay degmada Jilib, ee gobolka Jubbada Dhexe ay ku dishay nin ay ku eedeysay inuu ahaa Sixiroolle kadib markii Maxkamad ay dil toogasho ah ku xukuntay, iyadoo aan jirin qaareenno madax-banaan oo ninkan loo qabtey.
Ninkan oo lagu magacaabi jiray Axmed Kuusane Xasan ayay Al-Shabaab kasoo qabatay tuullada Jooraha loo yaqaan ee ku taalla Jubbada Hoose, waxaana xukunkiisa dilka ah lagu fuliyay fagaare ku yaalla Jilib, oo Jubbada Dhexe katirsan shalay gelinkii dambe.
War kasoo baxay Kooxda ayaa lagu sheegay in Axmed uu deganaa degaanka Garaseey Kuusa, halkaasi uu sixirka uga shaqeysan jiray, iyadoo lagu eedeeyay inuu ragga iyo dumarka is-qaba oo kala geyn jiray, inkastoo eedaas ay dhinaca Al-Shabaab ka timid.
Al-Shabaab ayaa dilal ku fulisa dadka ay ku eedeyso inay Sirdoon yihiin ama katirsan Askarta dowladda iyo AMISOM ee dagaallada lagu qabto, waxaana hay'adaha xuquuqda aadanaha sheegeen in kiisaska dilalka Soomaaliya ay kordheen 10-kii sano ee lasoo dhaafay.